Kubbaa Miilaa: Arsenaalii fi Maanchister FA Cup irratti wal argu - BBC News Afaan Oromoo
Kubbaa Miilaa: Arsenaalii fi Maanchister FA Cup irratti wal argu
Arsenaal torbanoota hamoo qormaataan guutaman hedduu dabarsullee tapha Cheelsii wajjin taphaterratti injifannoon galuunsaa taphattootas ta'e leenjisaa garechaa keessatti miira mo'achuu uumeera.
Tapha darberratti utuu warri Arsenaal Cheelsiidhaan mo'amaniiru ta'ee silaa sadarkaa afraffaaf falmachuun Arsenaaliif qormaata cimaa ta'a ture.
Warri Arsenaal miira mo'achuu akkanaa keessa wayita jiranitti taphni waancaa FA har'a galgala Maanchister Yuunaayitid waliin taphatan mo'icha Arsenaaliin xumurama jechuun namoonni akka raagan taasiseera.
Gama biraatiin Soolshaayariin kan durfamu Maanchister Yuunaayitid erga Joosee Morrinoo geggeessee taphoota piriimerliigii ja'a walitti aansuun mo'ateera.
Manni murtii Obbo Barakat faa Guraandhala 1,2011tti beellame
Hanga ammaatti warri yuunaayitiid dorgommiiwwan taphaa torba walitti aansuun kaan mo'atan yoo ta'u kan har'aas yoo irra aanan saddeettaffaa ta'a jechuudha.
Humna haaraa fi mala maltee fooyya'aan kan as ba'an Maanchister, keessatuu taphataa collee akka Maarkas Raashfoordi fa'aan durfamuunsaa, akka boojuun galan abdii itti horeera.
Abdiin Arsenaal waancaa mo'achuuf qabu yoo jiraate waancaa FA waan ta'eef taphni kun baayyee murteessaadha.
Leenjisaan Arsenaal Unaayi Emirii gareen isaan ijaaraa jiran garee piriimerliigii kamuu caalaa iddoo qabachuun bakka hunda cufanii kan taphataniidha jedhan.
Kana jechuun taphattoonni sochii si'ataa fi mala taphaa fooyya'aa qabatanii dirree seenu jechuudha.
Yeroo ammaa rakkoon Arsenaal keessaa bahuu dadhabe toora ittisaarra fakkaata.
Sara ittisaarraa karaa qarqaraa kan taphatu Heektor Bileeriin miidhaa irra ga'een taphoota kanaan booda bara kana taphataman keessatti hirmaachuu dhabuunsaammoo leenjisaa Arsenaalif qormaata cimaadha.
Xiinxalaan Kubbaa MiillaaBBC Maarki Laawuransan garee haala abdachiisaa keessatti argamu Maanchisteritti qormaata cimaa kan ta'u tapha Arsenaal har'aati jedheera.
Tilmaama mo'ichaas Arsenaaliif kan kenne yoo ta'u taphicha Arsenaal 2 fi 1n Maanchisteriin ni mo'ata jechuun tilmaameera.
Taphoonni biroon ammoo sanbata xiqqaa Maanchister Siitii fi Barnilee , Niwukastil fi Waatfoordi, Evartan fi Miilwool akkasumallee Weestihaam fi Weembileen ni taphatu.
Tilmaama taphoota kanneenii wayita kaa'uun, Laawuroon, Maanchister Siitii fi Niiwukastil goolii lamaa fi duwwaadhaan morkattootasaani mo'atu, Evartan ammoo morkataa isaa waliin tokko wal ixa xumura, akkasumallee Weestihaam lamaa fi tokkoon mo'ata jedheera.
Kan biraa taphoota Waancaa FA marsaa afraffaa kanarratti eegaman keessaa kan Dilbata taphatamu Kiristaal Paalaas Tooteenhaam waliin, Cheelsii fi Shefeldi Weensidey kan taphatamu ni eegama.
Taphoota kunneen Kiristaal Paalaas fi Cheelsiin qabxii walfakkaataa lamaa fi tokkoon morkattoota isanii ni mo'atu jechuun Laawuroon tilmaameera.
Viidiyoo Gantoota Tapha Kubbaa Miilaa: Salphina abbootii murteefi qondaaltota kubbaa miilaa Afriikaa